Dabaaldegga London Somali Festival – Kasmo Newspaper
Dabaaldegga London Somali Festival
Updated - June 10, 2015 6:42 am GMT
Keydka Kasmo: 13 November 2009 (London); Festifaalkan oo ah kii ugu horreeyey oo noociisa ah, ayna dhigayaan Soomaalida qurbe-joogga ah, waxaa lagu soo casuumay dad kor u dhaafayey ilaa 250 qof oo ka kala yimid madaxda ururrada jaaliyadaha, fannaaniinta, dhallinyarada, ururrada isboortiga, ururada qorayaasha, ganacsatada, iyo heyadaha warfaafinta iyo kuwo kale oo dhammaantood ka soo qaybgalay xafladda lagu baahinayo Festifaal dhaqameedka Soomaaliyeed ee London 2009.
Xafladda waxaa hagayey Axmed Cali Askar oo ka mid ah guddigii soo qabanqaabiyey. Heesta rasmi ah ee London Somali Fetsival ayaa markii ugu horreysay fagaaraha lagu soo bandhigay.
Waxaa curiyey fanaanka weyn Axmed Naaji, oo isagu magaalada Sanca ee dalka Yeman uga soo ambabaxay in uu kaalin taariikhi ah ka qaato Festifaalka Soomaaliyeed ee London (London Somali Festival).
Sanca ayuu heesta Festifaalka ku soo curiyey, kuna codeeyey, laxanka ku soo saaray, Studio uu leeyahay magaalada Sanca.
Festifaalka 1aad ee London waxaa astaan u ah, goobtana lagu soo bandhigay Logada Festifaalka, muuqaalka quruxda badan, Astaanta Festifaalka (Festival Logo) uu sameeyey Nuur Cabdullaahi Cali (Nuur-nasiib) oo ah farshaxanlle Soomaaliyeed oo caan ah.
Guddoomiyaha Guddiga soo qabanqaabada London Somali Festival. C/qaadir Shire Faarax, isla markaasna ah Tifaftiraha Wargesyska Kasmo ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey ujeedooyinka London Somali Festival, wuxuuna sheegay in Festifaalku yahay mid lagu soo noolaynayo kor u qaadida dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed, isla markaasna ‘London Somali Festival’ yahay mid ka madaxbanaan ‘Siyaasad, Qabiil iyo Kooxba’.
Ueeddooyinkiisa ugu waaweyn, waxaa ka mid ah:
In la muujiyo tilmaan ka marag kacaysa sida dalkan Britain ee dhaqammada, diinaha iyo isirada kala duwani, ay misna qaab nabadeed, is-xurmayn iyo is-tixgelin ugu wada nool yihiin.
2.Dhiirigelinta iyo kor u qaadidda waxbarashada, fanka, sugaanta, cilmi baarista, xoriyadda saxaafadda iyo daabacaadda qoraallada
Sidoo kale waa baaq weyn oo lagu simayo dalka Soomaaliyeed laftiisa qiimaha iyo qaayaha ay nabaddu leedahay gaar ahaan xilligan qallafsan ee lagu jiro.
C/qaadir Shire tilmaamay in London Somali Festifaal culayska saarayo inuu si cad u soo bandhigo weji fiyow oo qurxoon oo ay ummdda Soomaaliyeed leedahay, wuxuuna sheegay in London Somali Festival xusayo, una dabaaldegayo nolosha Abwaanno iyo fanaaniin Soomaaliyeed oo dhammaantood geeriyooday.
Wuxuu dadka xafladda fadhiyey xusuusiyey Maahmaahda gurracan ee tiraahda: “Nin dhintay, kabihiisaa ka roon!”. Taa a soo horjeed, London Somali Festival wuxuu sannad walba u dabaaldegi doono noloshii iyo kaalintii fanka hoggaamiyayaal faneed oo waaweyn, waxaana London SomFest (London Somali Festival) sannadkan xusayaa shakhsiyaddii, howl faneedkii iyo halabuur ilaa 12 abwaan oo dhamaantood geeriyooday. Waa: Abdillaahi Qarshe, Abdulqaadir Xirsi Yamyam, Abdi Bashiir Indhabuur, Abdille Raage Taraawiil, Abdi Muxumad Amiin, Prof Ahmed Nuur Yuusf, Aweys Geeddow Diinle, Dr Daahir Nuur Raafi, Hasan Sheekh Muumin, Huseen Aw Faarax Dubad, Maxamed Cali Kaariye iyo Maxamuud Tukaale.
C/qaadir Shire, Guddoomiyaha Guddiga Qabanqaabada wuxuu si gaar ah fagaaraha uga sheegay in uu nool yahay oo inala joogo hoggaamiyihii weynaa ee Fanka, waddanigii Soomaaliyeed, Aabbihii Muusigga Casriga ah Cabdullaahi Qarshe.
Saciid Jaamac Xuseen oo ah sugaan yahay iyo qoraa oo si kooban fagaaraha ugu sheegay qormo gaaban oo laguna magacaabo “ C/llaahi Qarshe iyo Maalmo lama ilaawaan”.
Festivalka dambe (The 2nd London Somali Festival) wuxuu xusi doonaa, una dabaaldegi doonaa noloshii Abwaanno iyo tiro kale oo fanaaniin, waxayna ahaan doonataa dhaqan joogta ah in aan dadka ummadda horumarkeeda ka soo qayb-qaatay xag dhaqan, aqoon, farsamo iyo halgamba.
Furitaankii London Somali Festival waxa ka soo qaybgalay, khudbad diiranna ka jeediyey Duqa xaaafadda Camden, Omar Faruque Ansari, isagoo sheegay in uu ku faraxsan yahay in London Somali Festival, xafladdiisa furitaanku ka dhacayso Degmada uu Duq-magaalo ka yahay, bulsho Soomaaliyeed ballaarina deggan tahay London Borough of Camden.
Waxaa goobta laga aqriyey warqad hambalyo iyo taageero ah oo uu Ra’iisal Wasaare Gordon Brown u soo diray London Somali Festival, isagoo ugu hambalyeey Soomaalida inay markii ugu horesay soo bandhigayso Festival, wuxuuna rajeeyey inuu guul ku dhamaado bandhig-dhaqameedkan.
, Xildhibaanadan oo dhammaantood ka tirsan Xisbiga Shaqaalaha (Labour Party) ayaa munaasabadda khudbad hambalyo iyo bogaadin ah ka soo jeediyey, iyadoo mudane Dawn Butler MP iyo Richard Carborn MP ay dhambaalkooda ku soo gudbiyey hab maqal iyo muuqaal ah oo lagu soo dhex diyaarshay Xarunta Barlamanka, halka Mudane Jeremy Corbyn MP uu isagu ka mid ahaa madaxdii toos uga qaybgashay Xafladdii furitaanka Festivalka. Halkaas oo uu khudbad xiiso badnayd ka jeediyey, kuna hambalyeeyey Soomaalida iyo gaar London Somali Festival oo ah astaan horumar oo bilowday.
Dr Zelalem Kebede, Agaasime goboleedka hay`adda ‘Council of Ethnic Minority Voluntary Sector Organisation’ (CEMVO) ayaa si kooban u sharaxay shaqada hay`addaiisa iyo sida uu arko London Somali Festival, wuxuuna bogaadiyey dadkii soo qaban-qaabiyey bandhig-dhaqameedkaan, isagoo xusay taageerada ururkiisu u hayo Festifaalka Soomalaiyeed ee London.
Guuleed Cussmaan oo ah Wakiilka HIRDO oo ah hey’add Samafal oo ka hawlgasha gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah, isaguna ka hadlay munaasabada. Guuleed oo ay hey`addiisu ka mid ahayd hey’adihii gacanta ka geystay qabsoomidda Bandhig-dhaqameedkaan ayaa waxaa soo dhaweeyey tilaabadan ay Soomaalida London horey u qaadeen.
Waxaa goobta lagu soo Bandhigay Cayaaro kala duwan Gabayo, Geeraar,, Majaajilooyin. Abdullaahi Botan iyo Rob Inglis ayaa soo bandhigay Majaajilo dadka ka wada qoslisay, Maxamuud Beeldaaje ayaa ‘Saar’ loo riyaaqay tiriyey, kuna saabsan Xaflada Lonon Somali Festival.
Dhinaca haweenka oo iyagu qayb lixaad leh ka qaatay dhinaca Cayaaraha, lebiska hidaha dhaqanka. Ugaaso Mire Cawaale, xaflada ka tirisay Geeraar dadka soo wada jitay, waxaana la soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo ay ka mid tahay cayaarta lagu magacaabo ‘Dhaanto’.
Duqa xaafadda Tower Hamlets ee Bariga magaalada London, Axmed Aadan Cumar oo ninkii ugu horeeyey oo Soomaaliyeed oo Duq-magaalo ka noqda Degmo ka mid ah magaalada London. Mayor Axmed wuxuu si kooban uga hadlay taariikhda jaaliyadda Soomaaliyeed oo dalka Britain oo ku tilmaamay inay tahay taariikh soo jirtay in ka badan 150 sano, wuxuuna sheegay Soomaalidu aysan ahayn dad dhawaan dalka timid, balse waxaa uu ku tilmaamay inay ahaayeen dadkii dagaalkii 2aad dalkaan wax ka difaacay, xuquuqna ku leeyihiin ee aysan ahayn waxa loo yaqaan New Immigrants, wuxuuna soomaalida ugu baaqay in aysan iskala qoqobin, aysana jirin meel ay Soomaalidu ku kala tegi karto, magacii la doono ha loogu yeeree.
Magacayda Fanaaniintii iyo Abwaanadii kala duwan ee xafladda ka soo qayb-galay, kaalin wacanna ka qaatay, waxaa ka mid ahaa:
Max/ed Ismacil Xudaydi,
Kaltuun Xasan ‘Katuun-bacado,
Cabdirisaaq W. Gaadaco
Xuseen Shire Cayaar-jecel
Yuusuf Cali Biixi
A/llaahi Bootaan Xasan.
10- Max/ed S. Sayid-xabiib
Cabdalla Naaji Axmed.
Ugaaso Mire Cawaale
Waxaa kaloo munaasabadda bilay, hiddana iyo dhaqankana si wacan u soo bandhigay dhalinyaro gabdho iyo wiilal ka koobnaa, oo shucuurka dadka dhaqaajiyey.
Ururka Samaddoon Somali Development Organisation oo saldhiggiisu yahay ‘Degmada Croydon’ ayaa meelmerinta xafladda kaalin muuqata ka qaatay, siiba xagga dhaqanka. Shirkad Soomaaliyeed oo diyaarinta cuntooyinka ku takhasustay, laguna magacaabo ‘Somali Tasty’ ayaa munaasabaddii furitaanka Festivalka dadka u diyaarisay cunto aad loo jecleystay, adeeg wacanna muujisay.
Guddiga Qabanqaabada ee London Somali Festival
Keydka Kasmo, tirsigii 292aad
Abwaan Cabdi-dhuux iyo heesta Dowladnimo
Soomaaliya oo weyday shakhsiyad weyn ‘Geerida Sooraan’